MAHESH BABU ၏ကူးယူထားသောဟိန္ဒူများစာရင်း (၁၈) - ဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ
Mahesh Babu ရုပ်ရှင်ကားဖြင့်ထုတ်ဝေသော Hindi (18)
Telugu ရုပ်ရှင်၏စူပါစတား, Mahesh babu , တောင်အိန္ဒိယစက်မှုလုပ်ငန်း၏ ဦး ဆောင်သရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဒီသရုပ်ဆောင်ဟာအခြားတွဲဖက်ကြယ်ပွင့်တွေအတွက်စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ထားတယ်။ သူတွင်အောက်ပါပရိတ်သတ်များစွာရှိပြီးသူ၏လှုပ်ရှားမှုထုပ်ပိုးထားသောမဆာလာရုပ်ရှင်များကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ သူ၏ရုပ်ရှင်များတွင်ဘာသာစကားများစွာဖြင့်ဇာတ်ကားများစွာရှိသည်။ ဤတွင် Mahesh Babu ၏ဟိန္ဒူဘာသာကူးယူထားသောရုပ်ရှင်များစာရင်းဖြစ်သည်။
1. '' အမှတ်အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်ဟုခေါ်တွင် '' စီးပွားရေးသမား ' စီးပွားရေးသမား ၁ '
စီးပွားရေးသမား (၂၀၁၂) သည်အိန္ဒိယတီဂူဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားထားသောရာဇ ၀ တ်မှုရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး၊ ရုပ်ရှင်မှာပါ ၀ င်ပါတယ် Mahesh babu နှင့် Kajal Aggarwal Nassar နှင့်အတူ ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္, Prakash Raj , Sayaji Shinde, Raza Murad နှင့် Brahmaji ပံ့ပိုးမှုအခန်းကဏ္ in အတွက်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၏တီဗွီဇာတ်ကားများအနက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည် ‘အမှတ် စီးပွားရေးသမား ၁ ' ။
ကြံစည်မှု - Surya သည် Mumbai Mafia ကိုအုပ်ချုပ်ရန်မွန်ဘိုင်းသို့လာရောက်ခဲ့သော်လည်းရဲကော်မရှင်နာ၏သမီး Chithra ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်။
2. 'Choron Ka Chor' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဆိုသော 'Takkari Donga'
Takkari Donga (၂၀၀၂) သည် Jayant Paranjee မှရိုက်ကူးသောအနောက်အနောက်လှုပ်ရှားမှုဟာသရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ Mahesh Babu, Lisa Ray နှင့် Bipasha Basu အဓိကအခန်းကဏ္မှပါ။ အဆိုပါရုပ်ရှင် box-office မှာပျမ်းမျှဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်အဖြစ်ဟိန္ဒူသို့အမည်တပ်ထားသောခဲ့သည် ‘Choron Ka Chor '' ။
ကြံစည်မှု - အိန္ဒိယ (ဇာတိအမေရိကန်မဟုတ်) တောရိုင်းအနောက်ပိုင်းရှိတရားမ ၀ င်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်စိန်တူးဖော်ခြင်းကိုလူဆိုးများနှင့်ပစ်ခတ်သည်။
၃။ 'Bobby' အား 'Daag- The Burning Fire' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
Bobby (၂၀၀၂) သည်တီဗွီဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး Sobhan ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်သည် Mahesh Babu၊ Aarthi Agarwal, Raghuvaran, Ravi Babu, Brahmanandam, Meher Ramesh နှင့် Prakash Raj ။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာစီးပွားဖြစ်ပျက်ကွက်မှုဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့အမည်ပေးထားပါတယ် 'Daag- The Burning Fire' ။
ကြံစည်မှု - လူငယ်နှစ်ယောက်အကြားချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မိသားစုနှစ်စုအကြားအငြင်းပွားမှုဖြစ်စေသည်။
၄။ ဟိဒီဘာသာအား 'Meri Adalat' ဟုအမည်တွင်သော 'Nijam'
နီဂျမ် Teja မှဒါရိုက်တာ (2003) Telugu ရာဇဝတ်မှုရုပ်ရှင်။ ထိုရုပ်ရှင်သည် Mahesh Babu နှင့် Rakshita တို့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည် box-office တွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့် 'Meri Adalat' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်အမည်ပေးထားသည်။
ကြံစည်မှု - ရုပ်ရှင်၏အဓိကဇာတ်လမ်းမှာနူးညံ့သိမ်မွေ့သောကောင်လေးသည်သူကြုံတွေ့ရသောအခြေအနေများကြောင့်အမာခံလူသတ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပုံနှင့်ပတ်သက်သည်။
'မင်းနံပါတ် ၁' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သော 'Raja Kumarudu'
Raja Kumarudu Mahesh Babu ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော K. Raghavendra Rao မှ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်တီဂလူးဟစ်ရုပ်ပြဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ Preity Zinta ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္၌တည်၏။ Raja Kumarudu သည်သူရဲကောင်းအဖြစ် Mahesh Babu ၏ပထမဆုံးသောရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး၊ အကောင်းမြင်သုံးသပ်မှုများရရှိခဲ့ပြီးစီးပွားဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်ခေါ်ဆိုခဲ့သည် '' မင်းသားနံပါတ် ၁ ′ ။
Kanhaiya Kumar ကသွန်း
ကြံစည်မှု - Raj Kumar သည် Khandala ရှိသူ၏ ဦး လေး Dhanunjay ကိုအားလပ်ရက်ခရီးထွက်သည်။ အဲဒီမှာသူကမိန်းကလေး Rani နဲ့တွေ့ပြီးသူမအတွက်ကျသွားတယ်။ သို့သော်သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ တစ်ကြိမ်တွင် Raj Kumar က Rani ကိုလူရမ်းကားများထံမှကယ်တင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူမအတွက်ကျဆုံးသွားခဲ့သည်။ အတိအကျထိုအချိန်တွင်, Dhanunjay Raj Kumar ရဲ့မိဘများ၏ခါးသောအတိတ်ဖော်ပြသည်။ ပြီးတော့ဇာတ်လမ်းကအဲဒီကနေရုတ်တရက်လှည့်ကွက်ကြာပါသည်။ အဲဒါဘာလဲ၊ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ၊
၆။ 'Arjun' အားဟိန္ဒူဘာသာအား 'Maidaan-E-Jung' အဖြစ်ခေါ်ခဲ့သည်။
arjun (၂၀၀၄) တီဂူလှုပ်ရှားမှု - ဒရာမာဇာတ်ကားကိုဂူနာရှာရှာကရေးသားခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင် Mahesh Babu သရုပ်ဆောင်, Shriya Saran Keerthi Reddy၊ Raja Abel, Prakashraj, Saritha နှင့် Murali Mohan ။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Box-office မှာပျမ်းမျှအထက်ဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့အမည်ပေးထားသည် 'Maidan-E-Jung' ။
ကြံစည်မှု - လူငယ်တစ် ဦး သည်သူ့အမေ၏ပျော်ရွှင်မှုကိုအာမခံပေးရန်နှင့်သတ်ဖြတ်သောယောက္ခမများထံမှသူမကိုကာကွယ်ရန်အသက်စွန့်သည်။
၇ ။ Athadu ကို 'Cheetah- The One of The Power' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဆိုခဲ့သည်
Athadu Trivikram Srinivas မှရေးသားပြီးဒါရိုက်တာအိန္ဒိယတီဂယ်လ်လှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်။ ဒီရုပ်ရှင်မှာ Mahesh Babu ရဲ့ ensemble သရုပ်ဆောင်မှုပါရှိပြီး Trisha Krishnan , အဆုံးမှာ Sood Kota Srinivasa Rao၊ Sayaji Shinde၊ Nassar နှင့် Prakash Raj တို့ဖြစ်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာနာမည်ကြီးပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့လည်းခေါ်ကြတယ် '' Cheetah- တစ်ခုမှာ၏ပါဝါ '' ။
ကြံစည်မှု - အငှားအတွက်သေနတ်သမားလူသတ်မှုများအတွက်ရှုမြင်သုံးသပ်သည်နှင့်ရဲထံမှပုန်းအောင်းနေစဉ်လူသေရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာယူဆတယ်။
8. 'Sainikudu' ကို 'Ab Humse Na Takrana' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
Sainikudu (၂၀၀၆) သည်ဂူနာဆက်ရှာအားရေးသားထားသောဒါရိုက်တာတီဂယ်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Mahesh Babu, Irrfan Khan , Trisha နှင့် Kamna Jethmalani အဆိုပါရုပ်ရှင်သည် Irfan Khan အားအဓိကရန်သူအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Prakash Raj သည်ထောက်ပံ့ရေးအခန်းကဏ္ in မှပါဝင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးကိုလာသောသေတ္တာကြီးအဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်အမည်တပ်ထားသည် 'Ab Humse Na Takrana' ။
ကြံစည်မှု - Siddharth သည်ရေဘေးသင့်သူများကိုကူညီရန်နှင့်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများကိုလက်ထဲသို့မကျရောက်စေရန်ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်သူနှင့်အဂတိလိုက်စားမှုရှိသောနိုင်ငံရေးသမားများအကြားစစ်ပွဲတစ်ခုဆင်နွှဲသည်။
၉ ။ Athidhi ကို 'အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Khiladi: The Iron Man' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဆိုခဲ့သည်
Athidhi Mahesh Babu တွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသောတီလူးလ်ဇာတ်ကားသည် (၂၀၀၇) ဖြစ်သည် Amrita Rao က ။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Box-office မှာကောင်းမွန်စွာဖျော်ဖြေနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ '' နိုင်ငံတကာ Khiladi: အဆိုပါသံက Man '' ။
ကြံစည်မှု - Athidhi သည်မွေးစားမိဘများကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့်မှားယွင်းစွာပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရပြီး ၁၃ နှစ်ကြာထောင်ချခံရသည်။ သူပြန်ရောက်လာသောအခါ Amrita ကိုသူချစ်မြတ်နိုးသည်။ သူသည်သူ၏မွေးစားမိဘများ၏သမီးဖြစ်သည်ကိုမသိ။
၁၀ ။ Khaleja ကိုဟိန္ဒူဘာသာဖြင့် Jigar Kaleja ဟုခေါ်သည်
Khaleja (၂၀၁၀) သည်အိန္ဒိယတီဗွီဘာသာစကားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစိတ်ကူးယဉ်လှုပ်ရှားမှု - ဟာသရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ Trivikram Srinivas မှရိုက်ကူးပြီး Mahesh Babu သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ မသီတာရှာတီ , Prakash Raj အဓိကရန်သူကစားသည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည် Flop တစ်ခုဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည် 'Jigar Kaleja' ။
ကြံစည်မှု - ဤရုပ်ရှင်သည်အိန္ဒိယတွင်တရားမ ၀ င်သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောရောဂါတစ်မျိုးသည်ဝေးလံသောကျေးရွာတစ်ရွာကိုပျက်စီးစေသည့်အခါရွာသားများကတက္ကစီယာဉ်မောင်းကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြသည်။
တကျိပ်တပါး။ ' 1: Nenokkadine '' 1: Ek Ka Dum 'အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက် Dubbed
1: Nenokkadine (2014) Sukumar ကရေးသားနှင့်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး အိန္ဒိယ Telugu- ဘာသာစကားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်းထိတ်ရင်ဖိုရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရုပ်ရှင် Mahesh Babu နှင့်သရုပ်ဆောင်ထားသည် Kriti ငါဆိုသည်ကား ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္၌တည်၏။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာပျှမ်းမျှအနိမ့်အမြင့်ဖြစ်ပြီး၊ '1: Ek Ka Dum' ။
tenali Raman sab တီဗီသွန်း
ကြံစည်မှု - တစ် ဦး ကရော့ခ်ကြယ်ပွင့်ကသူ့မိဘများသေခြင်းအတွက်လက်စားချေရှာသူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးကျော်လွှားရမည်ဖြစ်သည်။
၁၂။ 'Dookudu' ကိုဟိန္ဒူဘာသာစကားဖြင့် 'The Real Tiger' ဟုခေါ်သည်။
Dookudu (၂၀၁၁) သည်အိန္ဒိယကွန်ဂိုဘာသာစကားဖြင့်ပြုလုပ်သောဟာသဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး Srinu Vaitla မှ Mahesh Babu နှင့်ဒါရိုက်တာဖြစ်သည် မခင်မာရုသ Prabhu ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္၌တည်၏။ ဖြန့်ချိသောအခါအပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်စီးပွားဖြစ်အောင်မြင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်ခေါ်ဆိုခဲ့သည် 'The Real Tiger' ။
၁၃။ 'Naani' ကိုဟိန္ဒူဘာသာဖြင့် 'Nani- The Magic Man' အဖြစ်အမည်တပ်ခဲ့သည်
နာနည် (၂၀၀၄) သည်အက်ဂျေ Suryaah မှတီဟီတီရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး Mahesh Babu သရုပ်ဆောင်သည်။ Amisha Patel ။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Box-office မှာပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး Hindi လို့နာမည်ပေးခဲ့တယ် '' အဆိုပါမှော်က Man Nani- ။
ကြံစည်မှု - Naani သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေရန်ကြိုးစားသော်လည်း ၈ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူ၏တီထွင်မှုနှင့်အတူသူ၏ဘဝကိုလုံးလုံးပြောင်းလဲစေသည့်သိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး မှကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကောင်လေးကဒီဟာကသူ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေပြီးသားကောင်း၊ ချစ်မြတ်နိုးပြီးဖခင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိဘူး။
၁၄ ‘ Aagadu 'ကို' Encounter Shankar 'အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဆိုသည်။
Aagadu Srinu Vaitla မှဒါရိုက်တာအိန္ဒိယတီထွင်ဖန်တီးထားသောဟာသရုပ်ရှင်။ ဒါဟာ Mahesh Babu ပါရှိပါတယ် တာမန်နာ အဓိကအခန်းကဏ္ supporting များတွင် Rajendra Prasad၊ Sonu Sood၊ Brahmanandam နှင့် M. S. Narayana တို့ပါဝင်သည်။ Shruti Haasan အထူးအသွင်အပြင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ၎င်းသည် Box Office တွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်တုံ့ပြန်မှုရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်အဖြစ်ဟိန္ဒူသို့အမည်တပ်ထားသောခဲ့သည် 'Encounter Shankar' ။
ကြံစည်မှု - တစ် ဦး တှေ့ဆုံအထူးကုဒေသခံတစ် ဦး goon လွှမ်းမိုးသောရွာတစ်ရွာသို့ CI အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ဆယ့်ငါးယောက်ရှိသည်။ ' Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu 'Sabse Badhkar Hum 2' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာတွင်ထည့်သွင်းထားသည်
Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu (2013) သည် Srikanth Addala မှရေးသော၊ ညွှန်ကြားထားသောအိန္ဒိယတီလီဂူလမ်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ဒါဟာပါရှိပါတယ် Daggubati Venkatesh Mahesh Babu Anjali Samantha Ruth Prabhu နှင့်အဓိကရာထူးများတွင် Prakash Raj, Jayasudha, Rao Ramesh, Tanikella Bharani နှင့် Rohini Hattangadi တို့ကပံ့ပိုးပေးနေသည်။ ဒါဟာထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်နှင့်အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်တပ်ထားသော 'Sabse Badhkar Hum 2' ။
၁၆ 'Srimanthudu' '' T ကအဖြစ်ဟိန်ဒီအတွက်အမည်ပေးထားသည် သူ Real Tevar '
Srimanthudu (2015) သည် Koratala Siva မှရေးသားပြီးညွှန်ကြားထားသောအိန္ဒိယတီလီဂူလမ်ဒရာမာရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ Mahesh Babu သည်ရုပ်ရှင်၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည် Shruti Haasan အမျိုးသမီး ဦး ဆောင်အဖြစ်။ Jagapati Babu၊ Rajendra Prasad, Sampath Raj, Mukesh Rishi, Sukanya နှင့် Harish Uthaman တို့သည်အဓိကအခန်းကဏ္ in မှပါ ၀ င်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ blockbuster ဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့အခေါ်ခံရသည် '' ရီးရဲလ် Tevar '' ။
ကြံစည်မှု - အရာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သန်းကြွယ်သူဌေး Harsha ဟာသူ့ဘဝမှာတစ်ခုခုပျောက်နေတယ်လို့ခံစားနေတုန်းပဲ။ အဆိုပါကွက်လပ်ကိုဖြည့်ရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်သူသည်လူတို့၏အပြောင်းအလဲကိုဆောင်ကြဉ်းရန်ရွာတစ်ခုကိုလက်ခံသည်။
17. 'Tapori Wanted' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သော 17. 'Pokiri'
ပိုကီရီ (2006) Puri Jagannadh ကရေးသားနှင့်ဒါရိုက်တာအိန္ဒိယတီဂူဘာသာစကားလှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်က Mahesh Babu နဲ့သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် Ileana D'Cruz Prakash Raj၊ Nassar နှင့် Sayaji Shinde တို့သည်ထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ in မှပါ ၀ င်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာနာမည်ကြီးပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့အမည်ပေးထားသည် 'Tapori Wanted' ။
ကြံစည်မှု - လမ်းဘေးလူသတ်သမားသည်အခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိပြီးသူပုန်းလျှိုးနေသောသင်္ချိုင်းတွင်းရှိဂိုဏ်းထဲ ၀ င်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
၁၈။“ The Real Tevar 2” ဟုဟိန္ဒူဘာသာဖြင့် Brahmotsavam ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
ဗြဟ္မစို (၂၀၁၆) သည်အိန္ဒိယတီဂူဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားထားသောဒရာမာဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး Srikanth Addala မှရိုက်ကူးထားသည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်တွင် Mahesh Babu၊ Kajal Aggarwal၊ Samantha Ruth Prabhu တို့ပါဝင်သည် Pranitha Subhash ခဲ role.2016 ၌တည်၏။ ၎င်းသည်ပျမ်းမျှရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည် 'The Real Tevar 2' ။
ကြံစည်မှု - မိသားစုတွင်သူ၏ရာထူးကိုခိုင်မာစေရန်အမျိုးသားတစ် ဦး သည်သူ၏သမီးနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်စီစဉ်သည်၊ သို့သော်သူစိတ်ထဲထားရှိသောသင့်တော်သောကောင်လေးသည်အခြားသူကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖြစ်သည်။
dangal ရုပ်ရှင်အဘို့အ aamir Khan ကလေ့ကျင့်ခန်း
bachchan အသက်အရွယ်နှင့်အမြင့် abhishek
rajpal yadav အသေကောင်ကိုပါ pic
bigg သူဌေးက 11 နှင်ထုတ်ခြင်းစစ်တမ်း